Chicas Poderosas: Manomboka Tambajotra Iray · Global Voices teny Malagasy
Chicas Poderosas: Manomboka Tambajotra Iray
Voadika ny 11 Jolay 2013 11:33 GMT
Ity lahatsoratra ity dia niangaviana ho soratan'i Mariana Santos, izay nanorina sy mitantana ny Chicas Poderosas, ilay tetikasa vaovao naoriny amin'ny maha-Knight International Journalism Fellow azy. Vao haingana izahay no nandefa lahatsoratra mitanisa io tetikasa io.
Lasa fiainako isan'andro, amin'ny maha-ao anatin'ny tarika Guardian Interactive ahy nandritra ny telo taona izay, ny miasa anaty efitrano famoaham-baovao miaraka aminà tarika marolafy misy mpamokatra rindrambaiko, mpanao gazety ary mpanome endrika. Nanomboka tamin'ny fiarahako tamin'ilay lehibeko taloha atao hoe Alastair Dant izany, izay nanana fomba fijery tsy hoe hanangana fotsiny tarika Guardian Interactive, fa koa ny mba hahafantarana ny filàna vehivavy eo amin'ny toerana iray manan-danja ao anatin'ny tarika misy azy. Nanova ny fiainako io: voalohany indrindra ny tombony eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny olona manam-pahaizana, ary faharoa ny mahita fa, raha ny marina, ny maha-vehivavy dia manova zavatra eo amin'ny tontolon'ny asan-tsika isan'andro, satria izahay namorona tantara vaovao miaraka amin'ireo teknolojia avo lenta sy fomba fijery manelingelina manoloana ny serasera.
Mariana Santos, mpamorona ny Chicas Poderosas (sary nampiasaina nahazoana alalàna)
Nahatonga ahy haniry hizara io traikefa io amin'ireo vehivavy maro hafa izany. Nahatsapa aho fa isika, vehivavy, indrindra fa ny faritry ny tontolo Latina no voalohany tokony hanapaka ny elatsika ary tsy hanonofy lavitra loatra sy hino amim-pahatsorana fa afaka handeha lavitra eo amin'ny asantsika.
Tsy fantatro io na vokatry ny fiheveran-tena ho ambany na tsy fahampiana fahatokisan-tena, na koa angamba ireo faniriana diso tafahoatra sy fisisihana hikatsaka ny lafatra! Mandray anjara amin'izany ny fiarahamonintsika, mahatonga ireo vehivavy ho sarotra vao tonga eo amin'ny toerana ambony eo amin'ny fitantanana sy amin'ireo asa teknika sasany. Mino aho fa isika no tokony ho voalohany hino ny tenan-tsika aloha.
Izany no antony nanombohako ny “Chicas Poderosas” (Vehivavy Mahery) tany Amerika Latina, miaraka amin'ny fanohanan'ny International Center for Journalists (ICFJ) – Ivontoerana Iraisampirenena ho an'ny Mpanao Gazety sy ny Knight Foundation. Miantso ireo matianina mendrika indrindra niarahako niasa sy niray latabara tamiko aho, mba hahafahanay hizara ny tantaranay mikasika izay fomba nataonay ka nahatonga anay ho toy izao ankehitriny ary ny fomba hahafahan'ny ankizivavy tsirairay hahatratra izay tanjona tiany.
Hizara fitaovana sy zotra arahana izahay izay tena natokana ho an'ireo andraikitra resahanay: fitrandrahana ireo angona, famoaboasana, ny famelabelarana mba hisian'ny zava-misongadina iaraha-miasa, ny teknikam-panadihadiana, ny teknikan'ny fampitàna tantara amin'ny alalan'ny jery, sns. Kanefa, katsahanay indrindra ny mba hamoriana vondrona vahiny iray manana traikefa isankarazany mba hiara-miasa, manaiky ny fiovàna, ary mankalaza ny fahafahana mamorona tantara vaovao. Mety mifameno ireo tantara ireo, omena aina na fijerena angona tsotra fotsiny, mampiasa ireo teknika nampianarin'ny tarika izay ianaran'ireo mpandray anjara ny fomba fametrahana dingana iray hoarahana ary andraisan'ny tsirairay anjara mba hisian'ny vokatra tsara.
Tanjona iray hafa an'ny Chicas Poderosas koa ny hanomboka tambajotra iray ahafahan'ny olona mifandray, manohy mamokatra, sy manohy mifampizara fahalalana.
Katsahan'ny Chicas Poderosas ny hanokatra toko iray miaraka aminà solontena izay hiasa ho toy ny masoivohony hanaparitaka fahalalàna sy ny foto-kevitry ny fiasàna anaty tarika isaky ny firenena Latino-amerikana tsirairay, amin'ny fahatokisany ireo vehivavy izay afaka mitondra fiovàna anivon'ny tontolo ara-tekinikan'ireo trano famoaham-baovao. Ny hevitra dia ny handrisika ireo vehivavy mba hino ny tenany ihany sy hiasa mafy. Te-handrisika izay fomba fijery mirona amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanahin'ny fandraharahàna izay izahay…. miasa betsaka ary vitsy teny! Tonga eo amin'ny famintinana isika hoe ny tanjon'ny “tonga lafatra” dia fahavalon'ny “ngeza”, satria matetika ny ahiahiahy ny amin'ny antsipirihany dia mahatonga antsika tsy hanao zavatra raha vao eritreretintsika fa tsy ho tena lafatra ilay izy. Mieritreritra aho indraindray fa ilaintsika ny mamela ny tenantsika hanao zavara na dia tsy ho tonga lafatra aza ilay izy, (saingy farafaha-ratsiny efa mba nanandrana) ary raha toa isika maka lesona avy amin'izay tsy nety, afaka atombotsika hatrany ny andiany 2.0!
Afaka manaraka an'i Mariana sy ny asany ao amin'ny Chicas Poderosas ao amin'ny tranonkala, Facebook, ianao, ary ao amin'ny Twitter @poderosaschicas. Raha any Amerika Latina ianao, jereo ny iray amin'ireo hetsika ataon-dry zareo.